Baadari Kenyan oo Muslimay kadibna Kaniisaddiisa ka dhigaya Masjid. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka October 14, 2017	0 234 Views
Nairobi (Himilonetwork) – Baadari Kenyan ah ayaa muslimay kana dhigay Kaniisaddiisa Masjid – isaga oo sheegay inuu qaadan waayay sida haweenku ugu soo labistaan Kaniisadda.
Previous: Caddaan shan sano Madow addoonsanayay oo lagu xukumay xabsi 20 sano.
Next: Maqaal – Hiddaha iyo Dhaqanka lasoo nooleynayaa waa kee?!
La kulan – Gabadhii ku heestay 102 Luqadood oo kala duwan.